အီဟွာသူရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: Myanmar Students Gathering in Seoul
Myanmar Students Gathering in Seoul
ဒီနေ့ Sangmyung University က ပါမောက္ခဆရာမ Dr. Nayoun Park ရဲ့ Sponsor ကြောင့် ဆိုးလ်အနီးတ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာတက်နေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲလေးတစ်ခု ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိက ဆော်သြပေးသူကတော့ ပါရဂူကျောင်းသား ကိုရဲမင်းဟိန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ organize လုပ်မှုနဲ့အတူ အချိန်ကလဲ Midterm exams တွေပြီးကာစ Final Exams တွေအတွက် အရှိန်စယူ ကာစဆိုတော့ လက်လှမ်းမှီရာ သိသမျှကို ဖုန်းနဲ့တစ်မျိုး အီးမေးလ်နဲ့တစ်သွယ် ဖိတ်ကြားထားတဲ့အထဲက တက်ရောက်တဲ့သူ ၂၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Seoul National University, Korea University, Yeonsei University, Ewha Womans University, Soghan University စတဲ့ကျောင်းတွေက ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေပါ။ ကျောင်းသူတွေဘဲများပြီး ကျောင်းသားထဲကတော့ အင်ဂျင်နီယာဘက်က ပါရဂူကျောင်းသား နှစ်ယောက်ဘဲပါလို့တောင် ဆရာမက မိန်းကလေးတွေဘဲများတယ်နော် ယောက်ကျားလေးနဲလိုက်တာလို့ တောင်ပြောနေပါသေးတယ်။ ရှိတော့ရှိပါတယ် နယ်ဘက်မှာလဲ ရောက်နေကြလို့ပါ အင်း . . . ဒါပေမယ့် ပညာသင်ဆုရတဲ့အချိုးကလည်း မိန်းကလေးတွေချည်းဘဲများသား နော်။ နောက်နှစ်တွေမှာ ပညာသင်ဆုလျှောက်တဲ့အခါ ရကြတဲ့အခါ ဒို့ဗမာယောက်ကျားလေးတွေများများ ပါလာပါစေဆုတောင်းရင်းနဲ့ဘဲ . . .
Posted by ewhainnshwe at 8:35 AM
yeminhein November 15, 2009 at 5:43 PM
i realy thank you for attended meeting ! ^^
i hope so, we will meet agin,
now, weather is begin cool,plz take care
(Ms Leading Ph.D Candidate)
NGMC Antenna Laboratory
(Next Generation Mobile Communication)
Department of Radio Science&Engineering
Seoul 139-701,South Korea
차세대 이동통신 안테나 연구실
서울특별시 노원구 월계동 447- 비마 관 406호
Aung Myo Thu November 16, 2009 at 2:02 AM
whatanice start ! we already did it.
Let's keep going.Cheers ...!
Korea-Myanmar Mutual Benefit January 12, 2010 at 4:03 PM
nice to hear, and see above comments
Unknown February 23, 2010 at 12:27 AM
Hi, this is PCNB (Presidential Council on Nation Branding). How have you been doing? We’ve been sending WSK Newsletters and other announcements onaregular basis, but it seems that not too many of you are checking emails. The email regarding the invitation to the musical “Sachoom” (scheduled Feb. 24) doesn’t seem to have reached many of you either. It’s regretful that justafew will be watching that wonderful musical. We are planningacultural tour sometime in March, so please keep your eyes out for the announcement. Also, we are going to make more frequent visits to your blogs and check your postings. So, make sure you keep up with your blogging activities. If you have any questions or messages for us, feel free to contact! (mkshin@koreabrand.go.kr / 02-2280-2778)
Korea-Myanmar Mutual Benefit March 27, 2010 at 6:46 PM
တည်ငြိမ်ခြင်း။ တည်မြဲခြင်း။ မပြောင်းလဲခြင်း တွေဟာလည်း ဘာသာရေးဘက်ကကြည့်တော့ တစ်မျိုး ကောင်းတာပါပဲ။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေကင်းပြီး ရောင့်ရဲတင်းတိမ်တဲ့သဘောပေါ့နော့။ မတိုးတက်ဘူးလို့တော့ မပြောသာပါဘူး။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေမတိုးတက်တာ တဘက်က စိတ်စွမ်းအားတွေတော့ လိုက်မမီအောင်မြင့်မားနေနိုင်တယ်လေ။
My own blog has created